उमेर ७८ वर्ष पुगेर के भयो र, मन त १८ वर्षकै कुमार केटोको भन्दा कम छैन नि! - हिमाल दैनिक
उमेर ७८ वर्ष पुगेर के भयो र, मन त १८ वर्षकै कुमार केटोको भन्दा कम छैन नि!
१९ असार २०७६, बिहीबार १८:३९
आजभन्दा ७८ वर्षअघि १९९८ मा कमलपोखरीमा बुबा गंगाबहादुर बस्नेत, आमा मनकुमारीको माइलो छोराको रुपमा मेरो जन्म भएको हो।
म जन्मिएपछि नै पेटको समस्याका कारण असाध्यै विरामी परेँ रे। मेरी आमा पनि विरामी भएपछि एक वर्षकै उमेरमा मेरो हजुरआमा पहाड (दोलखाबाट) आएर मलाई आफैँसँग लैजानु भएछ र उत्रै हुर्काउनु भयो।
दोलखाकै गाउँमा बाह्रखरी पढेँ र २००६ सालमा काठमाडौं आएँ। काठमाडौंस्थित घरमा आउँदा पहिलो पटक बुबालाई देखाउँदै आफन्तजनले ‘तेरो बाउ हुन् ढोग’ भनेपछि बल्ल मलाई मेरो बुबा पनि हुनु हुँदोरहेछ भन्ने थाहा भयो।
त्यसपछि मलाई बुबाले पद्मोदय माविमा भर्ना गराइदिनु भयो। मेरो बुबा पहिले नेपाल आर्मीमा जागिरे हुनुहुन्थ्यो। त्यहिबेला भएको दोस्रो विश्वयुद्धमा उहाँ मलेसियासम्म लड्न पुग्नु भएको थियो रे।
मेरो बुबा नेपालको पहिलो ‘चलचित्र सत्य हरिशचन्द्र, भक्त प्रल्हाद’को नाटकमा हिरो बनेर अभिनय गरिसकेको कारण उहाँलाई सबै साहित्यकार, कलाकारदेखि नेताहरुले पनि माया गर्दथे।
मेरो बुबा २००८ सालमा साहित्यकार भीमनिधि तिवारी अध्यक्ष रहेको नेपाल नाटक संघको महासचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यहि अवसरमा नेपालका समस्थ कलाकारहरु लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, भीमनिधि तिवारी, बालकृष्ण सम आदिसँग मेरो पनि चिनजान भयो।
२००८ सालमा नै भैरवबहादुर थापाज्यूको भैरव नृत्य दलमा मैले पनि डान्सरको रुपमा काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ।
२०११ बुबाले आर्मीको जागिर छाडेर सरकारी कर्मचारीमा सब्बाको जागिरे हुनु भएको थियो। त्यहि समयमा उहाँको तौलिहवा सरुवा भयो र म पनि बुबासँगै तौलिहवा गएँ। त्यहाँ केहि वर्ष बसेपछि भैरहवा सरुवा भयो र म पनि बुबासँगै गएँ।
त्यसपछि तौलिहवा र भैरहवा हुँदै बुबासँगै काठमार्डौ फर्किएर आएपछि भैरवबहादुर थापासँग भारतको आसाम, डिग्बोइ, डिब्ब्रुगढ, सिलोङ, गोहाटीमा नाच्न पनि गएँ।
कर्मचारीदेखि कलाकारितासम्मको क्षेत्रमा बुबाको छुट्टै पहिचान बनिसकेको थियो। त्यहि कारण मेरा बुबाको टंकप्रसाद आचार्य, बी.पी. कोइराला, सुवर्णशम्शेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय लगायतका राजनीतिज्ञहरुसँग पनि राम्रो जान पहिचान भएको थियो। त्यहि जान पहिचानको आधारमा २०१५ सालमा एसएलसी दिएलगत्तै नेपालको पहिलो गभर्नर हिमालय शम्शेर राणाले राष्ट्र बैंकमा एसिस्टेन्समा नियुक्ति दिनु भयो।
त्यतिबेला रेडियो नेपालले कलाकारहरुलाई गीत गाउन कलकत्ता पठाउने गर्दथ्यो। त्यहि क्रममा गीत गाउन चाहनेहरुको दर्खास्त आब्हान भयो र मैले पनि दर्खास्त दिएँ।
त्यसबखत नारायण गोपाल पनि दर्खास्त दिनु भएको थियो। तर, उहाँ छनौटमा पर्नु भएन म छनौटमा परेँ। त्यसपछि रेडियो नेपालका कलाकारद्धय उहि गोविन्दबहादुर गुरुङ र ज्ञानबहादुर श्रेष्ठको साथ लागेर गीत रेकर्ड गर्न कलकत्ता गएँ।
तत्कालिन राजा महेन्द्रकी जेठी रानी इन्द्रराज्य लक्ष्मीको नाममा इन्द्रेणी रेकर्ड अन्तर्गत कलकत्तामा ‘चौतारी घ्याङ्ला नानी कान्छा,’ लोकगीत र ‘रिमझिम रिमझिम पानी पर्ला’ बोलको आधुनिक गीत रेकर्ड गरी फर्किएँ। यी दुई गीत १६ सालमा सार्वजनिक भएपछि चम्किए, त्यसपछि त म पनि गायनको क्षेत्रमा स्थापित भएँ।
त्यसपछिका दिनमा ‘ओइ नाना, गएको मंसिर महिनामा, भोटमाथि चीनमा, काठमाडौंकी नेवार्नी, हेर्दा राम्रो माछापुच्छ्रे’ जस्ता अनगिन्ती गीत गाएँ।
२०२० सालमा राष्ट्र बैंकको जागिर छोडेर सञ्चय कोषमा जागिर खान पुगेँ। जहाँ मैले जीवनको उत्कृष्ट समय अर्थात करिब २९ वर्ष विताएँ र ०४९ सालमा प्रथम श्रेणीमा स्वच्छिक अवकास लिएँ। पेन्सनको जीवन विताएको पनि झण्डै ३० वर्ष पुग्न लागिसक्यो।
अहिले लाग्दछ, जागिर नभएको भए म पनि सडकछाप कलाकार हुन्थेँ होला। तर, जे होस् महिनाको राम्रै पेन्सन आउने हुँदा खान बस्नको समस्या पनि छैन र गीत संगीतको क्षेत्रमा पनि आफ्नै पाराले आफूसँगै आफूलाई माया गर्नेहरुको भावनामा कुनै ठेस नलगाई स्वाभिमानका साथ लागिरहेको छु।
गायनको क्षेत्रमा लाग्दा सबैभन्दा दुःख भनौँ वा गाह्रो कुरा, नेपालका विभिन्न भाषा भाषीका शब्द र त्यसको सहि उच्चारणसँगै नेपाली लोकगीतको मौलिकतालाई जस्ताको तस्तै संगीतको धुन र लयमा उतार्न हो झैँ लाग्दछ। किन भने, कलाकारले पूर्वको राई भाषामा बोलिने शब्द र त्यसको उच्चारणदेखि सुदूरपश्चिममा बोलिने डेउडाको शब्दसँगै त्यसको हाउँभाउ आफूमा उतार्न त्यति सजिलो कार्य होइन। तरपनि मैले यस विषयमा असफलताको पगरी गुथ्नु परेन, त्यहि नै मेरो अहो, भाग्य हो जस्तो लाग्दछ।
आज त्यहि कलाकारिताको कारण संसारभरकै नेपालीले मलाई माया गर्छन्। जहाँ गए पनि एक छाक खान खुवाउने र एक रात बास बस्ने दिने कुरामा कुनै हिच्किचाहट गर्दैनन्। त्यो नै मेरो जीवनको अमूल्य उपलब्धी हो कि झैँ लाग्दछ।
जीवनका उकाली ओरालीहरुमा हिड्दै गर्दा मन सधैँ खुशी हुन सक्दैन। त्यस्तो दुःखको क्षण मैले पनि महसुस गरेको छु। विशेषगरी कतिपय गाउँमा पुगेर त्यहाँको लोक भाका संकलन गर्ने र सिक्ने क्रममा खल्तिमा पैसा नभएर भोक भोकै अर्काको घरमा बस्दा त्यी गाउँका दाजुभाईहरुले प्रेमपूर्वक गास, बास दिए। आफ्नो गाउँ ठाउँको लय र भाका सिकाएपछि फर्कँने बेलामा उहाँहरुलाई कुनै सहयोग नगरी फर्कनु पर्दाको क्षणमा मन खिन्न हुन्थ्यो।
अहिलेको कलाकारिता र समाजको हावापानी देख्दा लाग्दछ, नेपाल भाग्यमानी नेता, अभागी जनता भएको देश पो हो कि?
जीवनको ७८ वर्ष पुगदै गर्दा पनि आफूँमा रहेको जवानीको उर्जा कहिँ कतै घटेर गयो कि जस्तो लाग्दैन। त्यसैले यो उमेरमा पनि साथीभाइहरुसँग घुलमिल भएर बस्नै मन लाग्दछ।
किन भने, जसले जीवनमा सबैसँग मिलिजुली एउटै रफ्तारमा घुलमिल गर्न सक्यो उसैको जीवन खुशी र सुखमय हुन्छ। मसँगैका कतिपय साथीहरु जो उच्च ओहोदामा पुगेर सेवानिवृत्त भए त्यसपछि उनीहरुको जीवन समाजबाट एक्लिएर घरभित्रैको कम्पाण्ड वा कोठामा सिमिति भएको छ या त कतिपयको जीवनलिला समाप्त भइसक्यो। तर, म यो साथीभाइसँगको घुलमिल र रमझमपूर्ण जीवनका कारण अहिले पनि जीवन र जगतमा रमाइरहेको छु।
उमेरले ७८ भयो तर मन र स्वभावले भर्खरकै कुमार केटै हुँ कि जस्तो लाग्दछ।
अहिले पनि गीत गाउन छाडेको छैन। अहिले एउटा गीत गाउने तयारीमा लागिरहेको छु। जुन गीतको बोल छः
‘लान पाउँदैनौँ दाजै लान पाउँदैनौँ, घरमा राखेको नोटको बण्डल लान पाउँदैनौँ।
जान पाउँदैनौँ दाजै जान पाउँदैनौँ, मोटर चढी स्वर्गतिर जान पाउँदैनौँ।’
(बिहीबार ७८औं जन्मदिनको अवसरमा अनामनगरस्थित हिमाल दैनिकको कार्यालय परिसरमा लोक गायक कुमार बस्नेतले बर्थडे केक काटेपछि गरेको कुराकानीमा आधारित)
Prevपछिल्लोचेम्बर एक्स्पो २०२० फागुन १३ देखि
अघिल्लोदुई तिहाईको सरकारले अब के के नगर्ने लेखेर दिनुपर्यो: प्रवक्ता बास्कोटाNext